XAASAASI: Maxaa Ka Jira In Real Madrid Ay Bixinayso Lacagta Heshiiska Samuel Umtiti Lagu Burbirin Karo Oo Ay Xataa Lambarkii Uu Qaadan Layaa U Diyaarisay? – GOOL24.NET
XAASAASI: Maxaa Ka Jira In Real Madrid Ay Bixinayso Lacagta Heshiiska Samuel Umtiti Lagu Burbirin Karo Oo Ay Xataa Lambarkii Uu Qaadan Layaa U Diyaarisay?
May 9, 2018 Mahamoud Batalaale
Mustaqbalka difaaca dhexe ee kooxda Barcelona ee Samuel Umtiti ayuu wali mugdi wayni ku jiraa iyada oo mudooyinkii ugu danbeeyay si wayn loola xidhiidhinayay kooxaha Manchester United iyo Manchester City, laakiin waxaa soo baxay war xaasaasi ah oo sheegaya in Real Madrid ay qorshaynayso in ay xidiga ree France ula soo wareegto si muran wayni ku jiro.
Inkasta oo uu Samuel Umtiti heshiis waqti dheer ah kula jiro kooxdiisa Barcelona isla markaana uu saxaafada ka hor sheegay in uu ku faraxsan yahay joogitaankiisa Camp Nou, haddana waxaa jira warar badan oo muujinaya in wakiiladiisu wadaan qorshe ay Barcelona cadaadis ugu saarayaan in mushaarkiisa si wayn sare loogu qaado.
Barcelona ayaa diyaar u ah in ay Samuel Umtiti ka saxiixato heshiis cusub oo ay mushaarkiisa sare ugu qaadi karto balse waxay ka cago jiidaysaa in ay bixiso mushaar aad u qaali ah oo ay wakiilada Umtiti doonayaan iyada oo sidoo kale maamulka Barcelona ay doonayaan in lacagta heshiiska Umtiti lagu burburin karo si wayn sare loogu qaado.
Samuel Umtiti oo sanadkii 2016 kii isaga oo da’yar ah ku soo biiray Barcelona ayaa markiiba la siiyay fursad joogto ah oo kooxda kowaad ah taas oo uu si wayn uga faa’iidaystay isaga oo ka mid noqday difaacyada dhexe ee aduunka ugu fiican, waxayna taasi keentay in kooxaha Man United, Man City iyo Real Madrid ay hadda u arkaan xidig ay ka hoos xadi karaan Barcelona.
Wargayska ree Spain ee Diario Gol ayaa shaaca ka qaaday in Real Madrid ay Samuel Umtiti u aragto difaaca dhexe ee sida buuxda ugu haboon in uu Sergio Ramos kala ciyaaro difaaca dhexe waxayna qorshaynaysaa in ay bixiso lacagta heshiiskiisa lagu burburin karo taas oo colaada Madrid iyo Barcelona sii laba jibaari karta.
Heshiiska Samuel Umtiti ayaa lagu burburin karaa 60 milyan euros taas oo suuqa kala iibsiga hadda ka ah lacag ay kooxo aad u tiro badani bixin karaan kadib in Liverpool iyo Man City ay lacago 75 milyan gini iyo 60 milyan gini ah ka bixiyeen Van Dijk iyo Laporta sida ay u kala horeeyaan.
Dhinaca kale wargayska Diario Gol ayaa xataa shaaciyay in kooxda Real Madrid ay Umtiti u diyaarisay maaliyada No.23 haddii ay hirgaliyaan qorshahooda ku aadan in ay bixiyaan 60 milyanka Euros ee heshiiskiisa Camp Nou lagu burburin karo.
Wargayska Diario Gol ayaa sidoo kale shaaciyay in Mourinho oo doonayay saxiixa Samuel Umtiti uu hadda hoos u dhigay xiisihii uu qabay laakiin koox kasta oo bixin karta lacagta heshiiska Umtiti lagu burburin karo ayaa marka hore u baahan doonta in ay aqbalaad ka hesho Umtiti iyada oo haddii kale aanu qorshahani hirgali karin.
Maamulka Barcelona ayaan doonayn in Samuel Umtiti uu kooxdooda ka baxo laakiin waxay sidoo kale ka cago jiidayaan in ay aqbalaan dalabka qaaliga ah ee ay wakiiladiisu ku doonayaan in xidiga ree France si wayn sare loogu qaado mushaarkiisa.